» साथीहरु कोरोनाबाट बचौं है !
१६ बैशाख २०७८, बिहीबार ०६:५७
साथीहरु, म हजुरहरुलाई कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने कुराहरु बताउन गइरहेकी छु । हजुरहरुलाई थाहा नै होला अहिले फेरी कोरोना धेरै बढ्दै गइरहेको छ ।त्यसैले हामीहरु घरबाट सकेसम्म बाहिर घुम्न, खेल्न जान हुँदैन । गइहाले पनि मास्क लगाएर अनि सेनिटाइजर हातमा लगाउनुपर्छ ।
विद्यालयमा पढ्न जाँदा पनि साथीहरुसँग धेरै नजिक बस्नु हुँदैन ।हामी सबै जनाले हातमा स्यानीटाइजर र मुखमा मास्क लगाउनैपर्छ ।गुरु र गुरुआमाहरुले कापी चेक गरेपछि हामीलाइ दिनुहुन्छ, त्यसलाइ झोलामा राखेपछि हातमा स्यानीटाइजर दल्नुपर्छ ।साथीहरुलाइ अँगालो हाल्ने र नजिक जाने बानी गर्नुहुँदैन ।यस्तो बेलामा साथीहरुसँग खाजा बाँडेर पनि खानुहुँदैन । आँफूले लगेको खाजा मात्र खानुपर्दछ ।मेरा धेरै साथीहरुले मास्कले नाक नछोपेर घाँटीमा झुण्डाउने गर्नुहुन्छ ।नाक नछोप्ने हो भने मास्क लगाएको के अर्थ भो र ?
अस्ति नयाँ वर्षको दिनमा म मेरो बाबा र आमासँग घुम्न गएको थिएँ ।त्यतिबेला म जस्तै साथीहरु, दाई दिदीहरु अनि उहाँहरुको बाबा आमा पनि घुम्न जानुभएको रहेछ ।उहाँहरु मध्ये धेरै जनाले मास्क लगाउनुभएको थिएन । त्यस्तो भिडमा हिँड्दा पनि मास्क नलगाएपछि त कोरोना झन् बढ्दैन त । त्यसैले म साथीहरुलाइ आँफूले पनि मास्क लगाउने गर्नुपर्दछ र अरुलाइ पनि लगाउन सिकाउनु पर्दछ है भन्न चाहन्छु ।
हामीले सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ ।साबुन पानीले राम्रोसँग हात मुख र खुट्टा पनि धुनुपर्छ ।अनि हामीले नुहाइ धुवाइ गर्नुपर्छ ।ताजा खानेकुरा खानुपर्छ । कुरकुरे, लेज, चाउचाउ, मिठाइ जस्ता खानेकुराहरु खाने बानी गर्नुहुँदैन । खाँदा मिठा लागे पनि हामीलाइ यस्ता खानेकुराले असर गर्दछ र बिरामी पार्दछ ।
साथीहरु के हजुरहरुलाइ कोरोना कसरी फैलिएको हो भन्ने कुरा थाहा छ ? पहिला चीनमा कोरोना पशुपंक्षीको मासु खाएर मानिसमा आएको रहेछ । त्यही भएर माछा मासु खाँदा राम्रोसँग पकाएर मात्र खानुपर्दछ ।कोरोना धेरै बढ्दै गएको हुँदा एक ठाँउबाट अर्को ठाउँमा जाँदा धेरै ध्यान दिनुपर्छ है ! साथीहरु मैले भनेका यी सबै कुराहरु राम्रोसँग अपनाउनुहोला है !
जीएसनिकेतन मावि, हेटौंडा ।